Olee otú ịgba ịnyịnya ígwè si arụ ọrụ n'ime ụlọ? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Biking n'ime ụlọ - akwụkwọ ntuziaka zuru ezu
Biking n'ime ụlọ - akwụkwọ ntuziaka zuru ezu
Olee otú ịgba ịnyịnya ígwè si arụ ọrụ n'ime ụlọ?
Site na ihe ịga nke ọma nke Ice Cubes Big Three Leak, ọtụtụ ndị bụbu NBA dị egwu na-egosi n’ogige basketball, ọtụtụ ihu ndị maara nke ọma nwere ike ime ka anyị chefuo ma ọ bụ juo etu esi dị mma na NBA. Otu onye ọkpụkpọ dị otu a nke duru ike otu ya gaa Big Big Championship mbụ bụ Cuttino Mobley Ọ bụrụ na ị chetara Mobley ọ kacha mara amara maka oge ya na Houston Rockets, mana otu o si dị mma Cuttino Mobley na NBAMobley bụ nwoke aka ekpe -Six maka ndị na-agbapụ agbapụ, ndị na-egwuri egwu maka RhodeIsland Rams ma ndị Houston Rockets depụtara ya na 1998 na agba nke abụọ na nchịkọta 41st. N’akụkọ ihe mere eme, nchịkọta nke abụọ na-abụkarị ihe edepụtara, ebe naanị ụzọ abụọ n’ụzọ atọ nke nchịkọta nke abụọ Ọ dịkarịa ala otu egwuregwu na NBA ga-ahụ Houston Rockets egwuregwu anọ n’otu afọ edepụtara, atọ na nke mbụ gburugburu Mobley Ndị ahụ O doro anya, ọ lụrụ ndị egwuregwu gafere ike ha ma nwee obere, ma ọ bụrụ na ọ bụla, ohere iji merie Rockets- Team iji mepụta, mana ihe ndị a na-agba ụta kachasị mma bụ Mobley bụ onye na-eche nche na-agba égbè nke na-esite na bench ma na-egwuri egwu ọrụ n'oge Lockout-S 1999 oge na egwuregwu 50 na 29 nkeji kwa egwuregwu.
Ọ ga - abụ naanị egwuregwu ole na ole maka Mobley ka ọ ga - abanye na ntanetị maka oge fọdụrụnụ, na - agbatị ihe 10, na otu Allrookie nke abụọ n'afọ na - esote, ndị Rockets ga - anata SteveFrancis na nkwekọrịta ebe Francis gafere akwụkwọ ahụ. Vancouver Grizzlies rịọrọ ka ha abụọ bụrụ ezigbo ndị enyi iji wuo ụgbọ elu na-enweghị ike ịkọwapụ dị ka Damian Lillard na CJ McCollum nke Portland Trailblazers na-emezigharị usoro maka Rockets n'èzí ochie na nke ọhụrụ mgbe Mobley mụtara imeghari na egwuregwu NBA na kwa afọ , Na nke ọ na-egwuri egwu n'afọ nke atọ ya na njikọ ahụ, na-agbakwunye agbam ume, ọ ga-enwe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 20 isi na-esote oge 2001, ọ ga-eme otu ihe ahụ, na-ebute 21 isi maka egwuregwu ọ bụla na 2002, site na oge Rockets Yamin ga ịdọrọ China, ụlọ isii nke isii na-enwe ọnụnọ na Pl atz mere nsogbu ọbụna Shaq, malitere ileba nkwa maka Rockets na Yao na foto ahụ na-esote oge, Houston ga-apụta ntly melite ihe ndekọ ya site na 28 ruo 43 meriri n'afọ gara aga, ọ bụ ezie na ị ga-atụfu naanị otu egwuregwu site na Yao, na foto a ugbu a, ọnụọgụ ya ga-agbadata ntakịrị mgbe ha niile ga-arịgo ebe ọ bụ na ọ bụ ebe a na-eche n'ọfịs na oge 2000 304 nke Rockets ga-eme ma were ọnọdụ nke asaa mgbe oge ahụ gachara na Western Conference, mana megide ndị otu egwuregwu Lakers ga-eweda ha ala na egwuregwu egwuregwu ise. Omume ya na ọnụọgụ ya dịtụ iche na oge oge niile Lelee Mobley Francis na Kevin Kadel's duo ọzụzụ n'oge OrlandoMagic na offseason. na ihe egwuregwu 7 Houston ga-enweta Prime Tracy McGrady Tyronn Lue na ọrụ Reece Gaines Mobley na Rockets ga-akwụsị n'agbanyeghị na-emeghị kpakpando egwuregwu 17 isi maka egwuregwu ọ bụla adịghị njọ maka agba nke abụọ PickMobley ga-egwu naanị egwuregwu 23 maka Orlando na Oh 405 oge na nkezi nke 16 isi n'oge ahụ orlando na-ere Cuttino maka onye na-agbachitere Doug Christiehe na otu ahụ ma kpọọ nkeji dị egwu, merie egwuregwu 50 na Nzukọ Ọwụwa Anyanwụ siri ike, tinye isii ma sọọ mpi SeattleSuperSonics, naanị ịfufu na egwuregwu ise.
kọfị dị ukwuu
Nke a ga - egosi ụdị ọkpụkpọ Cuttino Mobley ọ nwere ike idobe akara ya na otu ọ bụla ọ na - egwuri egwu iji gosipụta na ọ bụghị naanị na ọ na - arụpụta ihe kamakwa ọ na - enwe ihe mgbaru ọsọ nke ọma ma na - agbaso ụdị egwuregwu nwere ike dakọtara uru otu otu apụ-oge ọ ga-abanye aka na nkwekọrịta afọ ise na-akwụ ụgwọ na LA Clippers, $ 42 maka oge 2005 na-abịanụ na oge nke isii nke isii. Cuttino ga-abụ onye na-agba egbe na mbido ọzọ, na-enyere ndị otu ahụ aka ịnọ nke isii na Western Conference IRA n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkeji iri na ise site na ị nweta akara anọ na enyemaka atọ megide Carmelo Anthony na DenverNuggets nke atọ, bụ ebe ha meriri n'agbanyeghị mmeri mgbe afọ 11 gachara na NBA ga-ewepụ na nke abụọ nke egwuregwu ahụ na usoro egwuregwu asaa megide PhoenixSuns nke abụọ lara ezumike nká site na ọnọdụ obi akpọrọ hypertrophic cardiomyopathy, ọnọdụ nke na-eme ka o sie ike karịa nke nkịtị maka obi nkpuchi iji gbanye ọbara. Mobley kacha mara amara n'oge ya na Houston Rockets yana Steve Francis ebe m chere na ọ bụrụ na ha nwere ikike ịkụzi ihe ma nwee afọ ole na ole ha nwere ike gafere akụkụ ugwu nke Nzukọ Ọdịda Anyanwụ siri ike.
Ọ nwere egwuregwu na-arụ ọrụ nke ọma, ọkachasị mgbe ọ na-egwu egwu na Clippers na Ọbụna nwere isii na anọ na egwuregwu Mobley, o siri ike ịche na na NBA nke taa ọ ga-agafe ihe karịrị 15 ruo 20 atọ kwa egwuregwu n'oge oge ya na Rockets, ebe ọ bụ na ọ bụghị nanị egwuregwu atọ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ọ nwere ike ịhapụ Igbe, ọ gaara enwe ike ịmegharị ụdị egwuregwu ahụ ma nwee ọfụma ebe ọ bụ na ọ dịla mma onye na-agba ụta 3 na Mobley ga-anwa ime NBA ịlaghachi na 35 afọ na 2010 n'efu ọ bụghị mmadụ niile Player nwere na-a Superstar nwere a ịga nke ọma ọrụ na NBAMobley. Nkezi kpọmkwem ihe 16 maka egwuregwu ọ bụla 3.9 rebounds na 2 isi 7assis ts maka ọrụ ya Cuttino Mobley egosila na ya nwere ike igwu egwuregwu na otu ọ bụla, ọ bụ ya mere o ji chọọ nnukwu asọmpi atọ ugbua.
Enwere m olile anya ihu ya na ndi ato ato ozo na afo a na abia
Kedu ka ị si agba gburugburu nke ọma?
Kedu akwara ị na-azụ n'ịgba ịnyịnya ime ụlọ?
Site naIme ụlọ ịgba ụlọapata ụkwụ na akwara ụkwụ ụkwụ yana nkwonkwo ụkwụ dị n'etiti ndị ọzọzụrụ azụ. Site na ịpụ na sadulu ugboro ugboro, a naghị eleghara ogwe aka na akwara ogwe aka.
Kedu ihe dị iche n'etiti ịgba gburugburu na ịgba ịnyịnya ígwè n'ime ụlọ?
Na-atụgharịkwesịrị ekwesị maka ndị na-egwu egwuregwu ma na-ekpori ndụ chọrọ inwe dị ka ọ na-atụ aro maka afọ niile. NaIme ụlọ ịgba ụlọdị ntakịrị kpụ ọkụ n'ọnụ ma atụ aro ya, dịka ọmụmaatụ, maka ndị na-akwadebe maka ịgba ọsọ ma ọ bụ chọọ ịnya igwe kwụ otu ebe na ugwu.
Ogologo oge ole ka ị kwesịrị ịgbagharị?
Ogologo olekedu kwa mgbe ị na-azụ? Dị ka onye mbido, ịkwesighi ịzụ karịa 3 ugboro n'izu iji nye ahụ gị oge zuru oke iji weghachi. Oge ọzụzụ bụ ihe dị ka nkeji iri anọ na mbido gụnyere ikpo ọkụ ma wetuo obi.16. 2016.
Kedu ihe ị chọrọ maka ịtụ ogho?
Maka na ewezuga ịbanye na klọb mgbatị ahụ ma ọ bụ egwuregwumkpaOnweghị ihe. Ewezuga uwe egwuregwu kwesịrị ekwesị, n'ezie, ọ bụkwa ya bụ ikpeNa-atụgharịNke mbu, uwe na-agba igwe ma obu akwa T-shirt siri ike, obere igwe nkpuchi na akpụkpọ ụkwụ. Ọtụtụ na-atụ aro nyocha nyocha nke obi, n'agbanyeghịnwoke na-atụ oghona-aga.
Kedu ihe ị na-azụ site na ịtụ ogho?
NaNa-atụgharịbụ ọzụzụ ntachi obi na igwe kwụ otu ebe nke na-eji ọtụtụ ahụ ike dị na ahụ. Cycgba ígwè n'ime ụlọ, tinyere ihe ndị ọzọ, na - eme ka apata ụkwụ, ala ụkwụ na akwara akwara dị mmazụrụ azụ.
Kedu ihe igwe kwụ otu ebe pụtara?
Ime ụlọ n'ime ụlọ, kwaNa-atụgharịakpọ, bụ mmemme ọzụzụ otu nke a na-arụkarị dị ka egwuregwu ntachi obi na igwe kwụ otu ebe, ihe a na-akpọ igwe eji eme ụlọ ma ọ bụ igwe kwụ otu ebe, yana egwu.
Kedu akwara ị na-azụ mgbe ị na-atụ ogho?
NaNa-atụgharịbụ ọzụzụ ntachi obi na igwe kwụ otu ebe nke gụnyere ọtụtụOtu akwaranke ahu na-emesi ike. Ime ịnyịnya ígwè na-azụ apata, ụkwụ ala na akwara, tinyere ihe ndị ọzọ.
igwe kwụ otu ebe tpi
Kedu uwe ogologo ọkpa maka ịgbagharị?
Ọ bụrụ na ị na-ejikarị ịgba ịnyịnya ígwè eme ihe, mgbe ahụ ị ga-eyi obere uwe ịgba ọsọ gịNa-atụgharịma tinye n'ime ịgba ịnyịnya ígwè n'ime ụlọ. Ma ọ bụghị ya, mgbe ị na-azụrụ uwe ịnyịnya ígwè, gbaa mbọ hụ na ha anaghị agbachi ma ọ bụ tuo. Ma ị bụ onyeHosena-ebu ya ma ọ bụ na-enweghị n'ihiNa-atụgharịadọta bụ ihe uto.
Kedu ihe kpatara e ji enwe ọtụtụ ịnyịnya igwe ịgba agba n'ime ụlọ?
Ọtụtụ achọpụtala ọ joụ nke ịgba ịnyịnya ígwè, ihe karịrị mmadụ ole na ole na-agba ịnyịnya ugbu a tụgharịrị gaa ịgba ịnyịnya n'ime ụlọ n'ihi mgbochi nke mpaghara na nsogbu nchekwa. Nke a emeela ka ndị na-azụ ahịa na-azụ ahịa na ụwa, ma, si otú a, ịbelata ngwaahịa. Nke ahụ dị mma, n’ihi na ọ pụtara na ọtụtụ ndị achọpụtala igwe kwụ otu ebe.
You nwere ike iji igwe kwụ otu ebe dị ka ịnyịnya ígwè ime ụlọ?
Onye na-eme mgbanwe mmefu ego a na-enye gị ohere iji igwe kwụ n’èzí n’èzí ka ị nwee ike iji otu ụzọ wiil rụọ ọrụ kacha. Ihuenyo na-egosiputa ụzọ mara mma, nke miri emi ka onye na-enye ọzụzụ iFit na-agbanwe echiche gị na nguzogide gị.
Kedu ụlọ ọzụzụ ịgba ịnyịnya ígwè kacha mma n'ime ụlọ?
The 11 Best Ime ụlọ cgba ígwè ọzụzụ. 1 Wahoo Kickr. wahoo fitness Kickr Wahoo wahoofitness.com $ 1,199.99 Zụta ugbu a Akụkụ akụkụ na-eme ka Kickr nwee ahụ iru ala ịnya Ọ bụghị nke ukwuu 2 Kinetic R1. 3 Elite Suito. 4 Tacx Neo 2T. 5 Saris H3. Ihe ndị ọzọ